Sidee dunida uga falcelisay dilka janaraalkii Iran ugu caansanaa ee Qaasim Suleymaani | Xaysimo
Home War Sidee dunida uga falcelisay dilka janaraalkii Iran ugu caansanaa ee Qaasim Suleymaani
Sidee dunida uga falcelisay dilka janaraalkii Iran ugu caansanaa ee Qaasim Suleymaani
Wasaaradda gaashaandhiga ee Mareykanka ayaa sheegtay in dilka Qaasim Sulaymaani uu amray Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump.
Sidan ayay dunida uga falcelisay dilka Qaasim Suleeymaan.
Argoosi xanuun badan
Hogaamiyaha Maxkamadda ugu sareyso dalkaasi Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa sheegay in ”aargoosi xanuun badan uu sugayo dambiileyaasha” ka dambeeyay weerarka, iyadoona dhanka kale Wasiirka Arrimaha Dibedda Iran Javad Zarif weerarkaasi ku tilmaamay ”ficil argagixiso caalami ah”
Madaxweyne Xassan Rowxaani ayaa ku hanjabay in ”dalka weyn ee Iran uu aargoosan doono”. Geerida janaraalka ayaa qabsatay warbaajinta Iran.
Severe revenge awaits the criminals (behind the strike) Ayatollah Ali Khamenei
Ka dib markii uu dhacay weerarka, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku baahiyay sawirka calanka Mareykanka.
Pentagon-ka Mareykanka ayaa sheegay in Suleeymaani uu qorsheynayay weerarro dheeraad ah oo lagu bartilmaameedsanayo diblomaasiyiinta Mareykanka ee ku sugan Ciraaq ka dib dilkii qandaraaslihii Mareykanka iyo weerarkii safaaradda Mareykanka ee Baqdaad.
Xoghayaha arrimaha dibedda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa baahiyay muuqaal muujinayay shacab Ciraaqiyiin ah oo wado calanka Ciraaq oo weyn kuwaasi marayay waddooyinka.
Musharaxa madaxweynaha ee xisbiga Dimuqraadiga Elizabeth Warren ayaa sheegtay in Janaraal Suleeymaan uu ahaa”dilaa”, go’aankii lagu dilayna uu ahaa ”mid aan laga fiirsan”
Safaaradda Mareykanka ee Baqdaad ayaa muwaadiniinta Mareykanka ku boorrisay iney ”sida ugu dhakhsiyaha badan uga baxaan dalka Ciraaq”, weeraka ka dib.
‘Khatarta sare u kacidda xasaradda’
Raysal-Wasaaraha Iran Caadil Cabdul Mahdi ayaa cambaareeyay dilka Janraal Suleeymaan iyo Talihii maleeshiyada Ciraaq Abu Mahdi al-Muhandis oo isagana lgu dilay isla weerakaasi.
Waxa uu sheegay in weeraka uu ahaa ”mid sare u sii qaadaya khatarta ah in Ciraaq uu ka dhaco dagaal ba’an,” sidaasi waxaa soo weriyay warbaahinta dowladda Ciraaq ee Ciraaqiya News.
“Suleeymani waxa uu si hagar la’aan ah u difaacayay danaha qaranka Iran. Waxaan u tacsiyeyneynaa shacabka reer Iran,” ayuu intaasi ku sii daray wasiirka.
Wasiirka Midowga Yurub u qaabilsan faransiiska Amelie de Montchalin ayaa iyadana ka hadashay dhacdadan: ”Waxaanu ku waa bariisanay duni ay khatarteedu sii kordheyso”.